जलविद्युत समूहको परिसूचक घट्दा ५.०८ अंकले घट्यो नेप्से, १२ समूहको परिसूचकमा कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण जलविद्युत समूहको परिसूचक घट्दा ५.०८ अंकले घट्यो नेप्से, १२ समूहको परिसूचकमा कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ?
on: May 23, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
१३२३.९६ विन्दुसम्म पुगेको नेप्से अन्त्यमा १३१४ दशमलव ५५ विन्दुमा बन्द
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ५ दशमलव शून्य ८ अंकले घटेर बन्द भएको छ । १ हजार ३२१ दशमलव ६९ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक करीब एक घण्टाको अवधिमा १ हजार ३२३ दशमलव ९८ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सो विन्दुपछि निरन्तर घटेको परिसूचक करीब तेस्रो घण्टामा १ हजार ३०९ दशमलव १२ विन्दुसम्म आइपुगेको थियो । सो विन्दुपछि अन्त्यमा केहि सुधारिएर परिसूचक १ हजार ३१४ दशमलव ५५ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
सात समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । यस साताका भएको पाँच कारोबारमा दुई दिन बजार बढेको छ भने तीनदिन घटेको छ । सातामा बजार ११ दशमलव ९१ अंकलो लाग्दा १६ दशमलव शून्य ८ अंकले घटेको छ । आइतवार बन्द भएको विन्दुबाट बिहीवार नेप्से २ दशमलव २९ अंकले घटेको छ ।
कारोबार भएका १२ समूहको परिसूचकमा पाँच समूहको परिसूचक बढेको छ भने सात समूहको परिसूचक घटेको छ । होटल, निर्जीवन बीमा, अन्य, लघुवित्त र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक बढेको छ । बुधवार ५ प्रतिशतले बढेको जलविद्युत समूहको परिसूचक बिहीवार ४ दशमलव ८२ प्रतिशतले घटेको छ ।
बिहीवार रू. ९३ करोड २६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम ३ दशमलव ५२ प्रतिशत घटेको छ । सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ८९ अंकले घटेर २ सय ८० दशमलव ३८ विन्दुमा पुगेको छ ।
दुई कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर र दुईको घटेर सर्किट ब्रेक
बिहीवार दई कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर र दुई कम्पनीको शेयर मुल्इ घटेर सर्किट ब्रेक लागेको छ । बढेर सर्किट लाग्नेमा एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र मल्टीपर्पस फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् भने घट्नेमा हिमालय उर्जा विकास र हिमालयन पावर पार्टनर रहेका छन् । एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९४ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ७२ पुगेको छ । हकपद स्वीकृत पछि मल्टीपर्पस फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. २३९ पुगेको छ । त्यसैगरी आईपीओ सूचिकृत भएसँगै हिमालय उर्जा विकासको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७२ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १३० मा पुगेको छ भने हिमालयन पावर पार्टनरको ८ दशमलव ७० प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १८६ मा पुगेको छ ।
बुधवार बढेर सर्किट लागेको अपर तामाकोशीको बिहिवार सर्वाधिक कारोबार
बुधवार अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको थियो तर बिहीवार भने कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । बुधवार शेयर खरीद गरेका लगानीकर्ताहरुले बिहीवार नाफा बुक गरेपछि कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको हो । बिहीवार कम्पनीको सर्वाधिक रू. १५ करोड ५९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २८७ पुगेको छ ।